राष्ट्र बैंकभित्र डेपुटी गभर्नरका लागि लिगलिगे दौड सुरु, १ पदका लागि ४ झापालीबीच भिडन्त « Bizkhabar Online
4 January, 2021 2:01 pm
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर पदका लागि बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरुबीच दौड सुरु भएको छ । आगामी फागुन १८ गतेबाट राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर द्वय चिन्तामणी शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठको ५ बर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दा सो पदका लागि कार्यकारी निर्देशकहरुबीच दौड सुरु भएको हो ।
विशेषत डेपुटी गभर्नर नियुक्तीका लागि गभर्नर र अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको विशेष भुमिका रहन्छ । गभर्नको सिफारिसको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले डेपुटी गभर्नर नियुक्ती गर्ने प्रचलन छ । तर अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको दुई डेपुटी गभर्नर पदका लागि लघुवित्त नियमन विभागका प्रमुख तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका आर्थिक सल्लाकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ एकल प्रतिस्पर्धी रहेको र बाँकी १ पदका लागि ४ जना लिगलिगे दौडमा रहेको सम्बद्ध स्रोतको भनाई छ ।
तर रोचक के छ भने बाँकी १ पदका लागि पुर्वेली तथा झापालीहरुबीच नै भिडन्त हुने देखिएको छ । अहिलेको राजनीतिक आस्था तथा भुगोलका आधारमा मोरङ घर भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल र प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्वाचन क्षेत्र दमक घर भएकी सार्वजनिक ऋण ब्यवस्थापन विभागकी डा. निलम ढुंगाना तिमिल्सिनाबीच डेपुटी गभर्नरका लागि मुख्य प्रतिस्पधा हुने देखिएको छ । कार्यकारी निर्देशकहरुमध्ये सिनियर एवं एक जनामात्रै महिला रहेको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै निर्वाचन क्षेत्र तथा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रमुख सल्लाहकार भेषराज अधिकारीसँग समेत उनको पारिवारिक सम्बन्ध रहेकाले पनि तिमिल्सिना अहिले मुख्य प्रतिस्पर्धीको रुपमा अगाडि आएकी छिन् । ढकाल पनि यस अघिदेखि नै डेपुटी गभर्नरको रुपमा चर्चामा रहँदै आएका छन् ।